Kudutshulwe abosizo lokuqala beyosebenza - Ilanga News
Home Izindaba Kudutshulwe abosizo lokuqala beyosebenza
Sebeyesaba ukuya eNanda ngemuva kokulalelwa unyendle, kwadutshulwa ozakwabo
KUNOVALO emphakathini waseMatikwe, eNa-nda, nasezisebenzini zezimo eziphuthumayo emuva kokuba kudutshulwe ozakwabo bakwa-EMRS beyola-nda umuntu obekuthiwa uyabe-letha entathakusa yayizolo ngo-Lwesithathu.
Lesi sigameko sishiye umpha-kathi wakule ndawo wethukile njengoba kuthiwa kunowesilisa oshayele abezimo eziphuthuma-yo ecela usizo lokulekelelwa ngowesifazane obelethayo kanti ubalalele unyedle.
Kuthiwa lezi zisebenzi zakwa-EMRS, zibe seziya kule ndawo ebezizohlangatshezwa kuyona yilo mlisa okuthiwa ubeshaye ucingo. Zihlanganile naye, wagi-bela emotweni ethi uzikhombisa indlela. Kuthe sebesendaweni esithele, wazijikela wadonsa isi-bhamu wazidubula.
Silobe izolo isimo sisibi kuzona esibhedlela. ILANGA lihambe-le indawo yesigameko lafica kusatakulwa i-ambulance ebiha-mba lezi zisebenzi ebiphoseke emhosheni emuva kokuba
Ilungu lomphakathi, elingeke lidalulwe ngenxa yezimo zoku-phepha, okuyilona elisize esinye salezi zisebenzi singqongqoza ebusuku, lithi bese kushaye ihora lesibili ezintathakusa ngesi-khathi bezwa kuqhuma isibhamu.
“Ngenxa yokuthi bekusentathakusa, siqhubekile nokulala, sangalunguza. Kuthe emuva kwemizuzu cishe ewu-5 kuqhume isibhamu, sezwa ku-ngqongqoza umuntu wesifazane obecela usizo. Siqale senqaba ukuvula ngoba sesaba emuva kokuzwa isibhamu kodwa wasitshela ukuthi ubeze ngomsebenzi kule ndawo.
“Ubaba wekhaya ulunguze ngewindi wabona ukuthi ngumuntu wesifazane obefa-ke umfaniswano wabezimo eziphuthumayo abahamba ngama-ambulance. Ube wukumvulela nje, wangena nezicabha ecela usizo. Engikuqaphelile wukuthi ubopha engalweni yakhe sabe sesimhlalisa phansi sambopha inxeba. Usilandise ngokwenzekile, sashayela amaphoyisa.
“Ngenhlanhla asheshe afika, saphuma naye siya emotweni, sayifica ingenamuntu, nozakwabo obedutshuliwe engekho. Sithe sisamile namaphoyisa, kwakhona amanye ashaya ucingo etshela lawa ebesimi nawo ukuthi lona omunye odutshuliwe asemtholile ngasesikoleni iMvaba lapho ebalekele khona wayofuna usizo,” kusho leli lungu lomphakathi.
ILANGA likhulume nezisebenzi zakwa-EMRS eziveze ukuthi seziyesaba ukuya eNanda.
“Kuyimanje ozakwethu iNanda bayayesaba, njengoba sekwenzeke lesi sigameko, kasazi sizokwenzenjani uma singathola ucingo lomuntu odinga usizo kule ndawo,” kusho esinye salezi zisebenzi esicele uku-ngadalulwa, kwazise kazivumelekile ukukhuluma nabezindaba.
UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZu-lu-Natal, uNkk Nomagugu Simelane-Zulu, ucashunwe esitatimendeni esikhishwe wumnyango wakhe egxeka lesi senzo asifanise nobulwane.
“Kuzokwenzekani uma siyeka ukuya lapho sibizwa khona ebusuku? Abantu bangafa, yingakho kubalulekile ukuba imiphakathi yethu isebe-nzisane nabomthetho ukuze kuzotho-lakala izigilamkhuba,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa, uCol Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe amacala amabili okuzama ukubulala nelokubamba inkunzi kuhlonyiwe.
Previous articleBakhala ngokungaqoqwa kukadoti
Next articleUmlimi ugqugquzela imfundo emakhaya